သတင်းအချက်အလက်မျိုးဆက် - နှစ်တထောင်နှစ်များစွာအချက်အလက်များကိုအခြေခံသောနည်းဖြင့်ချဉ်းကပ်ခြင်း Martech Zone
တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 28 ရက်၊ 2016 ခုနှစ် ဂျွန် Manganaro
တစ်ဦး၏အဆိုအရ Zillow ကမကြာသေးမီကစစ်တမ်း, အနှစ်တစ်ထောင်, အကောင်းဆုံးသုတေသနအတွက်န်းကျင်စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ဝယ်ယူခြင်းမပြုမီစျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်အချိန်ပိုမိုဖြုန်းနေကြတယ်။ ဒီခေတ်မီသတင်းအချက်အလက်သုံးစွဲသူများခေတ်သစ်သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်အဓိကအပြောင်းအလဲဖြစ်သော်လည်းရွှေအခွင့်အလမ်းကိုလည်းပေးစွမ်းသည်။ စျေးကွက်သမားများစွာသည်၎င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရောနှောခြင်းကိုဒစ်ဂျစ်တယ်လှုပ်ရှားမှုများကိုအာရုံစိုက်ရန်ပြောင်းလဲခဲ့ကြသော်လည်းယနေ့ထောင်စုနှစ်အသုံးချနေသောတူညီသောဘဏ္treာရေးအချက်အလက်များ၏အားသာချက်ကိုရယူရန်မှာလည်းအလားတူပင်အရေးကြီးသည်။
သုတေသနနှင့်ဒေတာနည်းပညာအတွက်မကြာသေးမီကတိုးတက်မှုများအသုံးပြုမှုကိုစားသုံးသူဘက်မှကန့်သတ်စရာမလိုပါ။ ကုမ္ပဏီများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်များကိုပိုမိုနားလည်ရန်အတွက်ဒေတာနှင့်အချက်အလက်များကိုတိုက်ထုတ်နိုင်သည်။ အနှစ်တစ်ထောင်သည်သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမည်သို့ဖြတ်သန်းသွားသည်၊ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုသူတို့စားသုံးနေသည်ကိုသိရှိခြင်းအားဖြင့်စျေးကွက်သမားများသည်ဤ ပို၍ အရေးကြီးသောလူ ဦး ရေအချိုးအစားကိုအယူခံဝင်ရန်အလို့ငှာအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Amazon လို ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဘာကြောင့်အရမ်းဆွဲဆောင်ရတာလဲဆိုတာစဉ်းစားပါ။ ဝယ်သူကိုသိလာပြီးဝယ်သူအတွက်ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ဤအချက်အလက်အမျိုးအစားများကိုအသာပုတ်။ မရပါ analyticsသငျသညျအုတ် -and မော်တာစစ်ဆင်ရေးကို run လျှင်ပင်။
ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကားအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့်၎င်းတို့ဖောက်သည်များ ၀ ယ်လိုသည့်ကားအမျိုးအစားများကိုနားလည်ရန်ကူညီနိုင်သော variable ၁၀၀၀ နီးပါးဖြင့် algorithm ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်အတိတ်ဝယ်ယူမှုအပြုအမူ၊ ပထဝီ ၀ င်ဈေးကွက်တွင်ရေပန်းစားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ထိုနည်းအားဖြင့်အနှစ်တစ်ထောင်သည်သူသို့မဟုတ်သူမလိုချင်သောကားအမျိုးအစားကိုသုတေသနပြုပြီးနောက်၎င်းကားသည်ရောင်းဝယ်သူ၏ရောင်းဝယ်မှုတွင်ရှိနေပြီးအနှစ်တစ်ထောင်ပေါ်လာသည့်အခါရောင်းချရန်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့သေချာပါသည်။
အနှစ်တစ်ထောင်သည်ရည်ရွယ်ချက်မရှိလှည့်လည်ကြည့်ရှုရန်ကားတွေအများကြီးကိုလည်ပတ်နေခြင်းမဟုတ်ပါ; သူတို့ကအွန်လိုင်းကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလုပ်ပါ။ သူတို့ဖြုန်းနေကြတယ် 17 နာရီ ဝယ်ယူမီမော်တော်ယာဉ်များအတွက်အင်တာနက်ပေါ်တွင်စျေးဝယ်ခြင်း။ ယနေ့ခေတ်တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာ၏အရသာနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရန်မှာအရောင်းကိုယ်စားလှယ်၏အလုပ်ဖြစ်သည်။ အနှစ်တစ်ထောင်ဒေတာနှင့်အတူလက်နက်ကြသည်; ၎င်းတို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်သင့်အနေဖြင့် (အကယ်၍ မပိုလျှင်) အချက်အလက်များစွာပါ ၀ င်ရမည်။ လွယ်ကူသောနည်းတစ်နည်းမှာသမိုင်းအရောင်းအချက်အလက်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်မည်သူ့ကိုရောင်းနေသည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ သငျသညျအနှစ်တစ်ထောင်ဝယ်လက်ပြောင်းလဲနေပါသလား သို့ဆိုလျှင်မည်သည့်ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသူတို့ဆွဲဆောင်နေသနည်း။ ဤအချက်အလက်များကိုမြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏အကောင်းဆုံးစာရင်းဒီဇိုင်းနှင့်အနာဂတ်အရောင်းတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။
အသက် ၁၈-၃၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ၈၁ ရာခိုင်နှုန်းဟာအံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်အခြားသူများထံမှထင်မြင်ချက်များကိုမဝယ်ယူမီရှာဖွေလေ့ရှိကြသည် Mintel မှသုတေသန။ စီးပွားရေးပိုင်ရှင်တစ် ဦး အနေဖြင့်အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အပျက်သဘောမှတ်ချက်များကိုစဉ်းစားမိသောအခါ၊ အွန်လိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်သင်၏ဖောက်သည်များကသူတို့၏အတွေ့အကြုံများနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ထင်မြင်ကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိစစ်။ မရသော၊ Yelp, Edmunds, TripAdvisor, Cars.com, Angie's List (သင်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည့်) များကဲ့သို့သောဆိုဒ်များရှိပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုသတ္တုတွင်းနှင့်သင့်အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ မည်သည့်ကိစ္စရပ်ကိုမဆိုဖြေရှင်းရန်။
သို့သော်မကောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုသာအာရုံမစိုက်ပါနှင့်။ အကောင်းမြင်သုံးသပ်ချက်များသည်အမှန်တကယ်တွင် ပိုမို၍ သိကောင်းစရာများဖြစ်နိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဂုဏ်သိက္ခာကိုသူတို့နားလည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်ကအကောင်းဆုံးဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်လူသိများပါသလား အထူးလျှော့စျေးအတွက်? ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်မှုအတွက်? ကျွန်ုပ်တို့သည်ကားကုန်သည်များနှင့်အလုပ်လုပ်သောအခါသူတို့၏အားသာချက်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး ၄ င်းတို့နှင့်အတူ၎င်းတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ ဖောက်သည်များသည်သူတို့၏စျေးနှုန်းများကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါကထို ritzy BMW ကားကိုမကြော်ငြာလိုကြပေ။
သင်၏စတိုးဆိုင်သို့အနှစ်တစ်ထောင်ရောက်ရှိရုံနှင့်မလုံလောက်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မိုဘိုင်းအတွေ့အကြုံသည်ယခုအခါ ၀ ယ်ယူမှုအပြုအမှုနှင့်အတူအခန်းကဏ္ playing မှပါဝင်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အနှစ်တစ်ထောင်၏ 57 ရာခိုင်နှုန်း In-store အတွင်းရှိစျေးနှုန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်သူတို့၏ဖုန်းများကိုအသုံးပြုပါ။ အကယ်၍ သင့်တွင်သူတို့၏မျက်စိကိုဖမ်းယူနိုင်သည့်ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်သူတို့၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုပေးသောအရောင်းဝန်ထမ်းတစ် ဦး ရှိပါကဖောက်သည်သည်သင်၏ပြိုင်ဘက်ကိုလမ်းပေါ်တွင် Googles နှင့်စျေးနိမ့်မှုတွေ့ပါကသင်ရောင်းချမှုကိုဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ သူတို့သည်အရည်အသွေးမြင့်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းသင်ယူနေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကားကုန်သည်တစ် ဦး သည်ကားမည်မျှယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ဆက်သွားလျှင်ကားဖောက်သည်ပြိုကွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားလုံးကိုဖတ်ရှုပါကမေးခွန်းများရှိလိမ့်မည်။
ဤနေရာတွင်သတင်းကောင်းမှာမိုဘိုင်းအတွေ့အကြုံသည်သင်၏အသင်းအတွက်အချက်အလက်ပုံစံတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ကိုဖြစ်သည်။ လှောင်ပြောင်သည့်စျေးဝယ်ခြင်းအတွေ့အကြုံများကို ပြုလုပ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်သူတို့၏ဖုန်းပေါ်တွင်ကြည့်ကောင်းမြင်နိုင်မည့်အရာများကိုစဉ်းစားပါ။ သင်၏စတိုးဆိုင်ရှိတိကျသောပစ္စည်းများ၊ ဒေသခံပြိုင်ဘက်များ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများစသည်တို့သည်သင်၏လူကြိုက်များသောကုန်ပစ္စည်းကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကရှာဖွေသည့်အခါတိုင်းပြိုင်ဘက်တစ် ဦး သည်အထူးလျှော့စျေးအတွက်ကြော်ငြာများကိုပြသနေကြောင်းသင်လေ့လာနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်တစ်ယောက်ယောက်ကအဲဒီထုတ်ကုန်ကိုရှာတဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ SEO လုပ်ဖို့သင် SEO အလုပ်တစ်ခုရှိမယ်ဆိုတာပြနေတာပဲ။
ဒါပေမယ့်ဒါကခုခံကာကွယ်ကစားရုံသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သည်မိတ်ဖက်များကသူတို့၏ပြိုင်ဘက်များသည်အထူးပြုလုပ်ထားသောပုံစံတစ်ခုသို့မဟုတ်မော်ဒယ်ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းမပြုလုပ်သောအခြေအနေများကိုခွဲခြားသိမြင်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ဤသည်ကကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းဝယ်သူများအားပိုမိုကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးရှိသည့်ပုံစံကိုသိုလှောင်ရန်နှင့် ၀ င်ငွေပိုမိုရရှိရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်တော်လှန်ရေးဟာ Facebook စာမျက်နှာတခုကိုဖွင့်တာဒါမှမဟုတ်ရှာဖွေရေးကြော်ငြာတချို့လုပ်တာလောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ အထက်ပါဥပမာများသည်သင်၏ဖောက်သည်များကိုပိုမိုနားလည်ရန်အတွက်အွန်လိုင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုသင်သုံးနိုင်သည့်နည်းလမ်းအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။ သင့်ဖောက်သည်များ၏မျက်လုံးများမှတစ်ဆင့်ဝက်ဘ်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည် ၀ ယ်ယူစဉ်အတွင်းသူတို့မြင်တွေ့နေသမျှအရာအားလုံးကိုနားလည်လာလိမ့်မည်။ သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအနိုင်ယူနိုင်ရန်သင့်လျော်သောချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
Tags: ကားတွေအများကြီးကားများဒေတာ-မောင်းနှင်ဒစ်ဂျစ်တယ်တော်လှန်ရေးGoldman Sachsနှစ်တစ်ထောင်အနှစ်တစ်ထောင်ပူစီနံမိုဘိုင်းအတွေ့အကြုံအနုတ်လက္ခဏာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပြုအမူဝယ်ယူreviewsZillow
စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက် Google Optimize Launchess